Soosaarka Maro adag ee Maro adag ee Shiinaha Soo-saaris iyo Warshad | Jiashun
Fiberka silica ah ee diidaya dharka waa nooc ka mid ah fiber-ka aan-dabiici ahaanta u adkeysan karin. Waxyaabaha ay ka kooban tahay silica wuxuu ka sarreeyaa 96%, barta jilcitaankeeduna wuxuu ku dhow yahay 1700 ℃. Waxaa loo isticmaali karaa 900 ℃ muddo dheer. Waxay ku shaqeyn kartaa 1450 ℃ muddo 10 daqiiqo ah, iyo worktable weli wuxuu ku ahaan karaa xaalad wanaagsan 1600 ℃ ilaa 15 ilbiriqsi.
Fiberka silica ah ee diidaya dharka waa nooc ka mid ah fiber-ka aan-dabiici ahaanta u adkeysan karin. Waxyaabaha ay ka kooban tahay silica wuxuu ka sarreeyaa 96%, barta jilcitaankeeduna wuxuu ku dhow yahay 1700 ℃. Waxaa loo isticmaali karaa 900 ℃ muddo dheer. Waxay ku shaqeyn kartaa 1450 ℃ muddo 10 daqiiqo ah, iyo worktable weli wuxuu ku ahaan karaa xaalad wanaagsan 1600 ℃ ilaa 15 ilbiriqsi. Maro adag oo jilicsan oo silica ah ayaa leh astaamaha xoogga sare, waxqabadka fudud iyo codsi ballaaran. Waxaa loo isticmaali karaa sida heerkulka sare u adkaysta, soo kabashada u adkaysta, ningax kulaylka iyo qalabka ningax kuleylka leh kuleylka kuleylka oo hooseeya, xasiloonida kiimikada wanaagsan, waxqabadka kuleylka wanaagsan ee korantada, hoos u dhaca kuleylka hooseeya, alaabada asbestos aan lahayn, wasakheyn iyo habsami u socod wanaagsan
1. Haddii aad rabto inaad ogaato faahfaahinta alaabada, qiimaha iyo macluumaadka rarka ee ku saabsan alaabada kale, waan kuu soo bandhigi karnaa.
2. Haddii qiimaheena iyo adeegeena aad aqbasho, waad nala soo xiriiri kartaa shaybaarrada si aan u hubino tayada, hubaal waan bixin karnaa, laga yaabee in qaarkood ay lacag la’aan yihiin.
3. Haddii aad waxoogaa dhibaato ah ka haysato gudbiyaha, waxaan la xiriiri karnaa kuwa ku soo wareejiya si loo diyaariyo shixnadda oo si habsami leh loogu rarto.
4. Haddii aad rabto inaad soo saarto ama aad hubiso inay khuseyso ama alaabooyin kale ay samaysanayaan suuqyadeena, waxaan halkaan ka raadin karnaa si aan u keydinno kharashka iyo waqtiga.
J: Waxaan nahay warshad iyo shirkad ganacsi, waxaan leenahay warshad noo gaar ah isla markaasna waxaan ka caawin karnaa macaamiisha inay helaan qalab sax ah oo ka jira suuqa weyn isla markaana aan wada rarno, si loo badbaadiyo lacagaha macaamiisha.
S2: Ma bixin kartaa shay-baarka?
J: Haa, waxaan ku bixin karnaa shaybaarka si waafaqsan baahida macaamiisha.
Q3: Muddo intee le'eg ayaan filan karaa in tijaabada la iga qaado?
J: Ka dib markaad bixiso khidmadda muunadda oo aad noo soo dirto macluumaad la xaqiijiyay, shaybaaradu waxay ku diyaarsan doonaan 7-10 maalmood gudahood. Shaybaarada ayaa laguugu soo diri doonaa adoo isticmaalaya xawaare sare waxayna imaanayaan 3-5 maalmood.
Q4: Muddo intee le'eg ayaa dhalmadaadu tahay?
J: Badanaa 15-20 maalmood.
Q5: Waa maxay shuruudaha lacag bixintaada?
J: Si joogto ah 30% T / T ka hor, dheelitirka ka hor rarka.
Hore: Mashiinka aluminium ee aluminium
Xiga: marada marooga la mariyey ee loo yaqaan 'vermiculite'